Kude kube ngoku, abasebenzi kuye kwafuneka baqinisekise ngokuqinisekileyo ukuba bosulelekile emsebenzini. Kodwa amazwe ali-16 ngoku acinga ukubeka uxanduva esibhedlele: Yenza ubungqina bokuba umsebenzi akazange asifumane esi sifo emsebenzini.
Enye yezinto ezininzi ezenza ukuba isifo se-coronavirus 2019 (COVID-19) kube nzima ukunyanga kukuba umntu akanakukhomba ngqo ukuba umntu usifumene njani isifo. Abasebenzi bezempilo abafumene i-COVID-19 (kunye neentsapho zabasebenzi bezempilo abaye bafa ngenxa yesi sifo) bafumanisa ukuba ukuzama ukufumana izibonelelo zembuyekezo yabasebenzi okanye izibonelelo zokufa kunokuba nzima, ingxelo zeKaiser Health News (KHN) namhlanje.
Kude kube ngoku, abasebenzi kuye kwafuneka babonakalise ngokuqinisekileyo ukuba bosulelekile emsebenzini, ingeyiyo ingxoxo elula ukuba iphumelele kuba baninzi abantu abaphethe izinto ngaphandle koluntu.
Ngoku, ngokuka-KHN, i-16 ithi kunye ne-Puerto Rico bafuna ukubeka uxanduva esibhedlele: yenza ubungqina bokuba umsebenzi akafumananga isifo emsebenzini.
"Amatyala ahluka kubungakanani babasebenzi abasebenza kubo," iingxelo ze-KHN. “Abanye bakhusela bonke abo bashiye amakhaya bayokusebenza ngexesha lokuyalelwa ekhaya. Abanye banqunyelwe kubaphenduli bokuqala kunye nabasebenzi bokhathalelo lwempilo. Abanye bahlawula kuphela abasebenzi abagulayo ngexesha likaxakeka, ngelixa abanye beza kuthatha ixesha elide. ”
Amazwe ahlukeneyo athatha iindlela ezahlukeneyo, kwaye ezinye zezo ndlela zichaswa zizibhedlele kunye nemibutho yezoshishino. U-KHN ucaphula umthetho osayilwayo eNew Jersey owenza ukuba kube lula kubasebenzi ababalulekileyo abafumene i-COVID-19 ngexesha likaxakeka ukubonisa ukuba bayifumene emsebenzini.
UChrissy Buteas ligosa eliphambili kwimicimbi yezorhulumente kuMbutho woShishino kunye noMzi mveliso waseNew Jersey, ophikisana nomthetho oyilwayo, owapasiswa yiNdlu yeeNgwevu zikarhulumente kwaye usalinde kwiNdibano Jikelele. "Inkxalabo yethu ikakhulu kukuba iindleko zala mabango zinokuyoyisa le nkqubo, ibingayenzelwanga ukujongana namabango ngexesha lobhubhane wehlabathi," utshilo uButeas.
I-KHN ikwajonga imeko eVirginia apho ugqirha oncedisayo (PA) owayesebenzisa iimvavanyo ze-COVID kwafuneka ukuba alaliswe esibhedlele xa esihla nesi sifo kangange veki, kwaye wonzakala engekho kwiiveki ezintlanu zomsebenzi.
I-PA icele ukugcwalisa iifom zembuyekezo yabasebenzi. Wayenqatshelwe iifom emva koko wagxothwa kwiintsuku ezintlanu kamva, ngetyala lesibhedlele elingama-60,000. Igqwetha uMichele Lewane umele i-PA kweli tyala. Ngokuka-KHN: “U-Lewane uthe umthetho e-Virginia uzakuthathela ingqalelo i-COVID-19 'njengesifo esiqhelekileyo sobomi,' ngokufanayo nomkhuhlane okanye umkhuhlane. Uye wathi kufuneka anike ubungqina "obucacileyo nobukholisayo" bokuba ubambe i-coronavirus emsebenzini.